Obodo Krakow nke ndị Juu | Akụkọ Njem
Maria | | Poland, Ihe ị ga-ahụ
Otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị na Krakow bụ mpaghara ndị Juu ya, nke a makwaara dị ka Kazimierz, ọ tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX site n'aka Eze Casimir III dị ka obodo dị iche ma na afọ ole na ole ọ kwụsịrị ịbụ akụkụ nke etiti obodo ahụ. Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ n'ime mpaghara ndị Juu? Anyị ga-agwa gị mgbe ịwụchara!
1 Akụkọ mkpirikpi nke Kazimierz
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na Kazimierz?
Akụkọ mkpirikpi nke Kazimierz
Obodo ndị Juu biri na Kazimierz site na ntọala ya ruo mgbe e bufere ndị bi na ya gaa ghetto Krakow n'oge Agha IIwa nke Abụọ., n’akụkụ ọzọ nke obodo ahụ (nke a maara dị ka Podgorze), ruo mgbe a kpụgara ha n’ogige ịta ahụhụ dị nso n’obodo ahụ.
Na njedebe nke agha ahụ, Kazimierz hapụrụ n'ọnọdụ jọgburu onwe ya ma ọ bụghị n'afọ 90 ka eserese nkiri nke ihe nkiri Schindler's List na ọrụ nrụzigharị malitere nke jisiri ike nye ya ọgbara ọhụụ. Ka ọ dị ugbu a, akụkụ ndị Juu nke Krakow bụ otu n'ime ndị ama ama na-ebi ma na-aga nri abalị ma ọ bụ oriri. Ọ bụ mpaghara nwere ọtụtụ ikuku, ọkachasị n'etiti ụmụ akwụkwọ.
Na mgbakwunye, Kazimierz enwetaghachila isi ya n'ihi na ọ na-adịwanye mfe ịchọta azụmaahịa metụtara ọdịnala ndị Juu dị ka ụlọ oriri na ọ koụ koụ kosher, ihe nkiri klezmer ma ọ bụ veranda nka, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọbụna n'oge ọkọchị ọ bụla a na-ahazi Ememme nke Omenala Hibru.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Kazimierz?
Ebe kachasị mkpa ịhụ na mpaghara ndị Juu nke Krakow bụ Galicia Jewish Museum, ụlọ nzukọ ya, nolọ Ọrụ Etnographic, thelọ Ọrụ Injinia Urban na ebe ọhụụ, ebe nzukọ maka ụmụ akwụkwọ.
Mgbe ịgagharịchara Kazimierz, nhọrọ kachasị mma bụ ịgafe osimiri ahụ iji gaa Podgorze, ghetto ndị Juu mbụ. Can nwere ike ime ya site na mmiri Bernatek nke, wuru na 2010, abụrụla onye ama ama n'obodo ahụ.
Synlọ Nzukọ Ochie ahụ bụ nke kasị ochie na Poland. Ewuru ya n’akuku ulo mbu na ebe ndi Ju n’oge Etiti. Ọ naghị arụ ọrụ ugbu a kama ọ nwere ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie maka ọdịnala ndị Juu.
Remuh Synagogue bụ sọọsọ otu na-enye ndị liturgy na Krakow. Na-esote ya ị ga-ahụ ebe a na-eli ozu nke ndị Hibru. Ebe abụọ a dị na etiti nke Kazimierz: Wolnica Square.
Foto | AB Poland
Synagolọ nzukọ Aịsak, Tempel na Kupah emegheghịkwa maka ofufe, mana enwere ike ileta ha ka ha na-enye ngosi ngosi nwa oge.
Nolọ ihe nkiri Ethnographic ahụ dị na nnukwu ọnụ ụlọ obodo ochie.
Gaghị agbaghara Chọọchị Santa Caterina, n'ụdị Gothic, ma ọ bụ nke San Estanislao, baroque.
A na-arara Museumlọ Ọrụ Ndị Juu nke Galicia maka ọdịbendị ndị Juu Polish ma nwee nnukwu ihe ngosi foto na-asọpụrụ ndị Oké Mgbukpọ ahụ na Agha Worldwa nke Abụọ.
N'ime afọ ndị Nazi na-achị, Podgorze bụ ghetto ndị Juu nke Krakow. Ọ bụghị otu n'ime ebe ndị a kacha eleta n'obodo ahụ, mana ịgagharị n'okporo ámá ya na-enye anyị ohere ịhụ foduru nke mgbidi ghetto, nke a pụrụ ịchọta na Lwowska 25 na Limanowskiego 62.
Ebe ọzọ dị oke mkpa bụ Bohaterów Square, bụ ebe a na-ahọrọ ndị Juu a ga-ebuga n'ogige ịta ahụhụ. N'ebe a bụ ihe ncheta nke oche, ụtụ Roman Polanski na-enye ndị Juu a manyere ịhapụ ụlọ ha ka ha bute ihe ha. N'otu ebe ahụ bụ Farmacia del Águila, naanị ụlọ ahịa ọgwụ dị na ghetto n'oge ọrụ na ebe nzuzo nke ọtụtụ ezinụlọ.
Na-esote ghetto Podgorze mbụ bụ ụlọ ọrụ Oskar Schindler, nke e kere iji jiri ọrụ ghetto dị ala ma mechaa zọpụta ndụ ọtụtụ narị mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Poland » Obodo Krakow nke ndị Juu
Ọdụ ụgbọ elu London
Etu ị ga-esi nweta tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala